သက်ဝေ: မြင်တွေ့သမျှ ပြောပြပါမည် (၂)
ပြောချင်တာလေးတွေ မမသက်ဝေ ပြောပေးသွားတယ်။ ဒီထက် အချိန်ပိုရလို့ ဘဘဆရာ ဆက်ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုကျေနပ်မိမှာပဲ။ နောက်ကျသွားတော့ ပါပါရာဇီ မလုပ်လိုက်ရဘူး။ နာလိုက်တာ.. :D
မိုးယံ May 5, 2011 at 6:13 PM
မနာလိုပါ....သူတို့က တိုက်ရိုက်နားထောင်နိုင်တယ်.. ဒန်ပေါက်လေးစား ကော်ဖီလေးသောက်ပြီးတော့။ အဟွန့်
ဆရာအောင်သင်း ဟောပြောပွဲတွေကို အရှင်လတ်လတ်ကြီး နားထောင်ချင်နေမိသည်။
ညီလင်းသစ် May 5, 2011 at 7:12 PM
အဲဒီမှာ နေတဲ့လူတွေ ကံကောင်းကြတယ်၊ ဒီလိုဟောပြောပွဲတွေကို ဆက်တိုက်နားထောင် ခွင့်ရတာ နည်းတဲ့အခွင့်အရေး မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒီနေ့လေးရဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို အခုလို ဖတ်ရတော့ အတန်ငယ်တော့ စိတ်အဆာ ပြေစေပါတယ်...။
Just jealous and longing for that kind of chance....
chocothazin May 5, 2011 at 9:38 PM
အဲဒီနေ့ က နောက်ကျသွားလို့နောက်ဆုံးတန်းကို ရောက်သွားတယ်။
မမသက်ဝေတို့နဲ့ မတွေ့ လိုက်ရတာ နာတာပဲး)
Ko Thet May 5, 2011 at 10:52 PM
ဒန်ပေါက်က ၂မျိုးပါ။ အဖြူက ဇေယျာ။ ငပိကြော် သရက်သီးသနပ်ပါ၏။ အပြာက Taj. အင်း ......။ ။
နောက်ဆုံး ပြီးတဲ့အထိ နားထောင်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ :)
:) ပျော်စရာကြီးနော်..။ အစ်မ နှစ်ပွဲလုံးသွားတာလား
အိမ့်ချမ်းမြေ့ May 6, 2011 at 6:59 AM
ပန်းချီ May 6, 2011 at 9:55 AM
နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ရောက်မှ ပြန်တာချင်းအတိုတို..နာမည်ကြီးဘလော့ဂါအစ်မသက်ဝေ ကိုမတွေ့လိုက်မိတာနာသကွာ..ကတောက်း))
အမကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်တဲ့တယောက်ကို မမှတ်မိသေးဘူးဟုတ်... အဟိ...
Pls go back to the last sentence of paragraph 2.
ZZZ May 6, 2011 at 9:40 PM
ဦးချစ်စံဝင်းအပြီး အပြီးမှာ ဒံပေါက်စားချင်လို. အပြင်ထွက်လာပါတယ်၊ အပြင်က တာဝန်ကျသူတွေက ဦးဖေမြင့် အပြီးမှာကျွေးမယ်ပြောပါတယ်၊ စားချင်သူ စားပါစေ၊ ပြန်ချင်သူပြန်ပါစေဖြစ်သင့်ပါတယ်၊ ခုတော့ စစ်သင်တန်းထက်တောင်ဆိုးသေး၊ ဟောပြောတာမပြီးသေးရင် မစားနဲ.ဆိုသလိုဖြစ်နေပါတယ်၊ NUS မှာတုန်းက ဒံပေါက်စောစောကျွေးပါတယ်၊ အစီအစဉ်က ပိုကောင်းသလိုပါပဲ၊ ခုံနံပါတ်ကလည်း လက်မှတ်ဝယ်ကတည်းက ကြိုပေးသင့်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်လည်း ခုံလက်မှတ် ယူပြီး ဟောပြောခန်း ထဲဝင်လာပြီးမှ ဟာဘယ်လိုကြီး လဲ ရေလည်းမပေးပါလား ၊ သူတို.ကရေပေးဖို.မေ့တယ်ထင်ပြီး သွားမတောင်းမိတာ ကံကောင်း၊ ကျွန်တော်လည်းသွားစရာရှိတာနဲ. ကိုယ့်လက်မှတ်ကို ဒံပေါက်တစ်ထုပ်ရအောင် တိုက်ပုံအနက်နဲ. ချာတိတ်လေး တစ်ယောက်ကိုလှူခဲ့ပါ တယ် ၊
စာပေဟောပြောပွဲလုပ်တာ အစားအကြောင်းမပြောနဲ.ဆိုရင် အစကတည်းက ဘာမှမကျွေးနဲ.ပေါ့ ၊
ဗိုက်ဆာဆာနဲ. ကလန်မန်တီးမော် မှာသွားပြီးစားတာ တော်တော်ကုန်သွားတယ် ၊ ဒံပေါက် စားချင်စိတ်ကမပျောက်သေးလို. တက်ခ်ျမှာ သွားစားတာ ဆိတ်သားဒံပေါက်က ၇ ဒေါ်လာတဲ့ ၊ စားလို.တော့ကောင်းသား ၊ အင်းလေးက ဘောက်ချာ ၅ ကျပ်ကလည်း သုံးရဦးမယ်ဆိုတော့ ကုန်ပေါက်ကြီးပဲ ..
အစားအကြောင်းမကျေနပ်ကြောင်းပြောီပီး ဟောပြောတာ နဲ.ပတ်သက်ပြီး နောက်တစ်ခေါက်လာ မန်.ပါဦးမယ် ၊
မသက်ဝေကြီးကိုမတွေ.မိတာနာသဗျ ၊ မဆွိကပဲလှသလား မသက်ဝေကပဲ ပိုလှသလား ၊ ဘယ်သူက အသက်ပိုကြီး သလဲဆိုတာလည်းသိချင်သေး၊ ခွိခွိ ..
(မှတ်ချက်။ ကွန်မန်.ရှည်ရေးပြီးမှ မတီတီဆွိက ကျွန်တော့်အား နည်မည်ဖျက်မှာကြောက်သဖြင့် ကွန်.မန်.အားဖျက်ပစ်ရန်စိတ်ကူးမိပါသည်)
VIP ဆို လို့ မြင် တာ လေး တ ခု ပြော ချင် တယ်
VIP အ တွက် ချန် ထား တဲ့ နေ ရာ တွေ များ တယ် ဒါ ပေ မယ့် အဲ ဒီ VIP ဆို တဲ့ လူ တွေ က ဖိတ် လို့ ကြား လို့ သာ လာ ရ တယ် စာ ပေ ဟော ပြော ပွဲ ကို ချစ် လို့ လာ တာ ဟုတ် ပုံ မ ရ ဘူး က လေး တွေ အိမ် ဖေါ် တွေ ခေါ် လာ က လေး တွေ က အ ရှေ့ ဆုံး တန်း က နေ ပြေး လိုက် လွှား လိုက် ၀င် လိုက် ထွက် လိုက် က လေး တွေ ထွက် တော့ မိ ဘ တွေ က ပါ ထွက် လိုက် နဲ့ တွေ့ ရ တာ အ ဆင် မ ပြေ ဘူး
ပြော ခွင့် ရ တာ ကျေး ဇူး ဗျာ
MN May 6, 2011 at 10:19 PM
မသက်ဝေ မဆွီတီ မတန်ခူး မသီတာ တို့သည် အတန်းတူ သူငယ်ချင်းများဖြစ်သောကြောင့် အသက်တူဟု ကောက်ချက်ချလျှင် ရနိုင်သည်။
မည်သူ ပိုလှသနည်း ဆိုတာကတော့ လူတကိုယ် အကြိုက်တမျိုးပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
ZZZ May 6, 2011 at 10:45 PM
ဘလော့တွေကိုဖတ်တာ ကွန်.မန်.ရေးတာ နောက်ကျလို.ထင်ပါရဲ့၊ မြန်မာစာကီးဘုတ် လက်ကွက်လည်း ကျင့်နေရလို.ပါ ....
မသက်ဝေကို ဘလာ့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ ကဗျာတစ်ခုမှာ (ဘလော့ဂါအမည်မေ့သွား) ကွန်မန်.မှာ ဗျာတွေ ဘာတွေနဲ.မန်.ထားတော့ အော် သက်ဝေဆိုတာ ကိုသက်ဝေဖြစ်မယ်ပေါ့ (ယောကျာင်္းကြီးပေါ့) ၊
မတီဆွိဆိုတော့ အော် .. ချက်နည်းတွေရေးနေ တော့ အသက် ၅၀ ကျော် အန်တီကြီးလို. ထင်မိလို.ထင်မိ
အော်ဓါတ်ပုံတွေ.တော့မှ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသူတွေလဲ မခေပါလား (ချောသားပဲလို.ထင်မိပါတယ်)
စည်သူ May 6, 2011 at 11:17 PM
ကို ZZZ ရေ။
Feedback တွေအတွက်ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေအစီအစဉ်တွေမှာ ညံ့ဖျင်းခဲ့မူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်တွေဗိုက်ဆာနေပြီမှန်း သိပေမယ့် အချိန်အရ နောက်ကျမှပြီးတော့မယ်မှန်းသိလို့ လူတွေညကျ တစ်ခေါက်ဗိုက်ပြန်ဆာမှာစိုးတာရယ်၊ ဆရာဖေမြင့်က မြန်မြန်လေးပြော
ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့် Break Time ကိုမရွှေ့လိုက်တာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဝေပေးလိုက်လို့ လူတွေပြုံထွက်လာရင် အထဲမှာဟောနေတဲ့ပွဲပျက်သွားမှာစိုးလို့လဲ ငြင်းလိုက်ရတာပါခင်ဗျာ။ ခုံနံပါတ်ပေးပြီးရောင်းရင် တနေရာထဲမှာပဲထိုင်ရောင်းမှ အဆင်ပြေမှာမို့လို့ ကျွန်တော်တို့ Cityhall မှာတနေကုန် ထိုင်ရောင်းနိုင်တဲ့သူမရှိတော့ အဆင်မပြေလို့ပါ။ ရေမပေးတဲ့
ကိစ္စကတော့ Convention စည်းကမ်းအရအထဲမှာ NO Food, No Drink ကြောင့်မို့လို့ပါ။ အဆင်မပြေတွေဖြစ်သွားတာကိုတော့ အားနာမိပါတယ်ဗျာ။ နောက်နှစ်မှာပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးပါ့မယ်။ ပွဲစမယ့်အချိန်ကြမှ Projector ကဖွင့်မရတာနဲ့ ပြင်နေတာကြောင့် ပွဲစချိန်နောက်ကျခဲ့ရပါတယ်။ နားလည်သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးကြတဲ့အ
တွက်ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပေးပါ့မယ်။ Feedback များလည်းပေးကြပါအုံးလို့။
Anonymous May 7, 2011 at 10:56 AM
မသက်ဝေရဲ့ ဘလော့မှာ feedback လိုလို complain လိုလို ကျွန်တော့်ရဲ့ ကွန်မန်.တွေ အတွက် ကြိုတင်တောင်းပန်ပါရစေ ....
ပြောစရာရှိတာကိုတော့ ဆက်ပြောပါရစေ .
ကိုစည်သူရေ အကျိုးအကြောင်းပြန်လည်ရှင်းပြတဲ့ ကွန်မန်.အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ
ကျွန်တော် က NUS ပွဲလည်းသွား ခဲ့ပါတယ်၊ နေရာကို နှိုင်းယှဉ်ရ ရင်တော့ Poly က ပွဲကပိုပြီးကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်တော့်တို.လို public transportation သုံးတဲ့ အတွက် MRT နဲ. နီးတဲ့ အတွက် တော်တော်လေးအဆင်ပြေ ပါတယ်၊ NUS ကတော့ တက္ကစီနဲ.အသွား/အပြန် လုပ်လိုက်ရပါတယ်၊
ခုံနဲ.လက်မှတ်ကတော့ ခုံနံပါတ်ကို ခွဲပြီး ရောင်းရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်၊ NUS အဖွဲ.လည်း ခွဲရောင်းပုံရပါတယ်၊
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ပထမအဖွဲ.က ဦးကျော်ဝင်း ၊ ဦးဘုန်းတို.ကို ကျွန်တော် မသိပါ ၊ ဒါပေမဲ့ သွားနားထောင်တဲ့ အခါ တကယ့်ကိုကောင်းပါတယ်၊
ဟောပြောတဲ့ ဆရာတွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သူတို.ထားတဲ့ စေတနာကိုလေးစားမိတဲ့ အပြင် သူတို.ရဲ့ ဗဟုသုတ၊ အတွေ.အကြုံ ကိုလည်း သတိထားမိပါတယ်၊
ကျွန်တော်ဟာ ဆရာဦးချစ်စံဝင်းရဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ၊ သူ.ရဲ့ ဤခရီးနီးသလားနဲ. အမေနဲ.အမေအကြောင်း စာအုပ်တို.ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဆရာရဲ့ ဟောပြောမူက အစီအစဉ် မရှိနဲ. ဖြစ်နေပါတယ်၊ အသက် အရွယ်ကြီးမြှင့်လာလို.လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်မိတာက နာမည်ကြီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဟာ စီးရီးထုတ်တဲ့အခါ အခွေက နားထောင်လို.ကောင်းပါတယ်၊ ရီကော်ဒင်း စက်အကောင်းအစားနဲ. အထပ်ထပ်အခါခါ ဆိုထားတာကို၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ့အဆိုတော်ကပဲ live ပွဲဆိုတဲ့အခါ သံစဉ်တွေမညီမညာဖြစ်နေ သလိုပေါ့ ၊
နောက်တစ်ခုအတွေ.အကြုံက ကိုယ့်ခုံနံပတ်နဲ. မထိုင်တဲ့ပြဿနာပါပဲ၊ ကျွန်တော် NUS ပွဲရောက်တဲ့အခါ နည်းနည်းနောက်ကျပါတယ်၊ အဲ့ဒါနဲ.စလုံးအမျိုးသမီးလုံခြုံရေးကို ကျွန်တော်လက်မှတ်ပြပြီးခုံနံပါတ်ကို ပြတဲ့အခါ သူမက ကျွန်တော့်ခုံမှာ တစ်ခြားသူထိုင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ နောက်က ခုံမှာ ထိုင်လို.ပြောပါတယ်၊ အဲဒါနဲ. ကျွန်တော်က ဘာကြောင့်ငါခုံမှာ ငါထိုင်ခွင့် မရှိတာလဲ လို. ပြန်ပြောတဲ့အခါ သူမက အဲဒါဆိုရင် ထိုင်နေတဲ့သူကို ဖယ်ပေးဖို. သူမက ပြောပေးမယ်တဲ့၊ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်းဆို ပဲ နောက်ကခုံမှာ ၀င်ထိုင်ပါတယ်၊ နဂိုကတည်း က စောစောပြန်ဖို.ထာင့်စွန်.ခုံကိုရွေးထား တာပါ၊
Poly ပွဲမှာလည်း ထောင့်စွန်. ခုံကိုရွေးပြီး သွားတဲ့အခါ သူများက ၀င်ထိုင်ထားပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ခုံက EE 37 ပါ၊ တာဝန်ကျတဲ့သူက ခင်ဗျားခုံမှာ အခြားလူထိုင်နေပြီ နောက်ခုံမှာထိုင်ဆိုပြီး ပြောပြန်ပါတယ်၊ အဲဒါ့နဲ. NUS cultural hall မှာလို သီးခံပြီးနောက်ခုံမှာထိုင်ရပါတယ်၊ ကိုယ့်က ဟောပြောပွဲကိုနားထောင်နေစဉ်မှာ ပဲ ကိုယ်လိုနောက်ကျတဲ့သူတွေက ၀င်လာပြီး ကိုယ့်ခုံနားမှာ ရစ်သီသီလုပ်နေရင် ကိုယ်ကပဲ ခုံကထပေးရမလိုဖြစ်နေပါတယ်၊ ကိုယ်က သူများခုံမှာထိုင်မိနေပြီကို ...
ကိုယ်ကနောက်ကျလို. ဘယ်သူ.မှမလာဖူး ထင်ပြီး လာထိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ နောက် တစ်ဖွဲ.က အဲ့ဒီ့ခုံမှာလာထိုင်တော့မှ တစ်ဖွဲ.လုံး ဖယ်ပေးပါတယ်၊ အဲ့ဒီ့အသစ်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ.ကလည်း ကျွန်တော့်ခုံမှာလဲမှားပြီးဆက်ထိုင်နေတော့ လည်း ကျွန်တော်သွားမထိုင်ချင်တော့ပါ ၊
(Google Account နဲ. sign in လုပ်လို.မရ လို.အမည်မသိနဲ.ရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်)
ခနွဲ May 7, 2011 at 4:06 PM
ဆရာအောင်သင်းက ဆက်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ခန်းမ အချိန် အဆင်မပြေတာကြောင့်ပါ။ ဆရာ ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ မိုးအလင်းကို နားထောင်ချင်ပါသေးတယ် အန်တီသက်ဝေ။ အန်တီ သက်ဝေကို ကျွန်တော့်အသိတစ်ယောက် ပြသော်လည်းပဲ ကျွန်တော်ရဲ့ မျက်လုံးမကောင်းတာကြောင့်လား သူ့ရဲ့ လက်ညိုးက လူအုပ်ကို ထိုးပြတော့ ဘယ်သူလို့ ကျွန်တော် ခနွဲ ခွဲခြား မသိတော့ မမှတ်မိလိုက်ပါ။ အန်တီသက်ဝေက လှမှာ သေချာပါကြောင်း။ နောင်တွေ့ရင်တော့ မုန့်ကျွေးရမယ်။
သက်ဝေ May 7, 2011 at 5:44 PM
ညီမ ဆွေဇင်... အမလည်း အဲလိုပဲ တွေးမိတယ်...
မိုးယံ ညီလင်း နဲ့ GD... ဒီလိုပွဲမျိုး နားထောင်ရစေချင်ပါတယ်... နောက်တော့ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ညီမ သဇင်... အမလည်း အနောက်ဖက်မှာပါပဲ... လူတွေကများတော့ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ခွဲမသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့...။
ကိုသက်... အိမ်ကထွက်လာတာ မနက် ၁၁း၄၅ လေ... အချိန်တွေ အရမ်းကြာနေလို့ နားထောင်ချင်ရဲ့သားနဲ့ ပြန်သွားတာပါ။ ဒန်ပေါက်က နှစ်မျိုးမှန်း ကိုသက်ပြောမှ သိတော့တယ်...း))
မွန်... အမက ဒုတိယပွဲ တပွဲပဲ ရောက်တယ်ညီမ...
မလေး... ဘယ်သူ့ကို မြင်ဖူးချင်တာလဲ... အဟိ...း))
ပန်းချီ... ပန်းချီ့ကိုတော့ အမ မြင်လိုက်ပါတယ်... အပြာလေးရောင်လေးနဲ့လေ... ဟုတ်ရင် မုန့်ဝယ်ကျွေး...း))
အမကို လှမ်းနှုတ်ဆက်တဲ့ ညီမလေး ငယ်ငယ်လေးကို ကောင်းကောင်းသိရှိ မှတ်မိကြောင်းပါ...
ZZZ နဲ့ VIP အကြောင်းပြောသွားတဲ့ Anonymous... Feedback တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီပိုစ့်တင်ထဲက မိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီက Feedback တွေကို မျှော်နေတာပါ။
စည်သူ ပြောပြသွားတဲ့ သူတို့ဖက်က အခက်အခဲလေးတွေကိုလည်း ဖတ်ပြီး နားလည် ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ခနွဲ... ဆရာအောင်သင်းရဲ့အပြောကတော့ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းကို ဖမ်းစားတာပါပဲ... ကိုယ့်ကို သေသေချာချာတော့ မတွေ့လိုက်ရပဲ လှမှာ သေချာတယ်လို့ ပြောလို့ ဘယ်ရမလဲ...း))
ဒီပိုစ့်ကိုလာဖတ်သူများနဲ့ Feedback ပေးသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Feedback များကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်...
Phyo Maw May 7, 2011 at 9:33 PM
၁၂ နာရီ ကျနော်လည်း ရောက်ပါတယ် မသက်ဝေကို သူများပြလို့ မြင်မိပါတယ်၊ ရောက်ရောက်ချင်း တံခါးမဖွင့်သေးတာကိုလည်း သတိထားမိပါတယ် အမှန်ကတော့ တံခါးမဖွင့်သေးပေမယ့် ဖွင့်ဝင်သွားလို့ရတယ် ထင်မိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကျနော်ကိုယ်တိုင်က sp ကျောင်းသားဟောင်းမို့ အသိမိတ်ဆွေနည်းနည်းရှိလို့ ရောက်ရောက်ချင်း ကိုယ့်ဘာသာ ဝင်သွားမိတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မနှစ်က နေပူကျဲတဲထဲမှာ တန်းစီခဲ့တာကို ပြန်တွေးမိရင် တော်တော်ကွာသွားတယ်ဆိုတာ ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာကို သတိထားမိတယ်။
ဒီနှစ်တော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ စိတ်ကူးထားတာမရှိလို့ ကင်မရာလဲ ယူမသွားမိသလို ကိုယ့်မှန်ဘီလူးနဲ့မှီမယ့် နေရာတို့ ထိုင်ခုံတို့လဲ ကြိုတွေးမထားမိခဲ့ဘူး။ မနှစ်က ပွဲတုန်းက နားထောင်ရတာနဲ့တင် အခြားအရာတွေ မေ့သွားတော့ ဒီနှစ် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တို့ ဘာတို့ လုံးလုံးမလုပ်မိဘူး။ စောရောက်ပြီး နေရာနောက်ပိုင်းဘက်ရတာ feedback ပေးတာ ကောင်းပါတယ် စီစဉ်တဲ့သူတွေ နောင်နှစ်တွေကျ ထည့်စဉ်းစားနိုင်တာပေါ့ ဒီနှစ် ခုံနံပါတ်တွေနဲ့ ဖြစ်သွားတာကိုက အရင်နှစ်က ခုံလုသလိုဖြစ်တာတွေ ကာမိသွားတာကိုက ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ feedback ကြောင့်ပဲဖြစ်ရမယ်။
ငတ် မရှက် ဆိုသလို ဗိုက်ဆာလို့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဆာတယ်လို့တော့ တွေးမိပါတယ် ဒါကလည်း ကိုယ်ညနေစာ စားတဲ့အချိန်ပုံမှန်က ရုံးဆင်းချိန် ၆ နာရီဝန်းကျင်ဖြစ်နေကျမို့ ဖြစ်တာလို့တွေးမိတယ်။ တချို့မိသားစုတွေတော့ ည၇ နာရီလောက် စားတယ်လို့ တွေ့မိတယ်။ လူအလိုက် တချို့လည်း ပိုဆာတယ် တချို့လည်း သိပ်မဆာသေးဘူး တချို့လည်း ကျွေးချိန်က အန်ကိုက်ပဲ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒန်ပေါက်ဗူးရလို့စားပြီး ဗိုက်ပြည့်သွားတော့ ဆရာဘဘအောင်သင်း ဟောပြောတာနားထောင်ရတာ အရသာရှိပါတယ်။ =D
@ZZZ ကိုယ့်ခုံသူများထိုင်တာ ကတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း မကြုံလိုက်ရလို့ ဘယ်လိုခံစားရမယ် တွေးပေးလို့မရပါဘူး၊ ထိုင်နေတဲ့သူကို ဖယ်ခိုင်းလို့ရပါတယ် ခုံနံပါတ်နဲ့ စနစ်ဆိုမှတော့ နေရာမှားထိုင်နေလည်း ပြောလို့ရမယ် တွေးမိတာပဲ။ စစ်သင်တန်းထက်ဆိုးသေးဆိုတော့ စစ်သင်တန်းမှာ ဒီ့ထက်ဆိုးတာ ကြုံခဲ့ပြီ ဒီလောက်က စာမဖွဲ့လောက်ပါဘူး မဟုတ်ဘူးလား ဒါမှမဟုတ် ကြားဖူးနားဝများလား =)
ကလင်မန်းတီးမှာ ထမင်းဆိုင်တွေ များပါတယ် Mall မှာသွားစားလို့ တော်တော်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာ မြင်ယောင်ကြည့်ပေးလို့ရပေမယ့် တရုတ်တန်းမှာ ဒန်ပေါက်တကူးတက သွားစားနိုင်မှတော့ အစားအသောက်အကြောင်းက အကုန်အကျများတယ် ပြောတာ မထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စလို့ပဲ သတ်မှတ်တာပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေတုန်းက ဒီလိုဟောပြောပွဲတွေ မကြုံခဲ့ရတဲ့ ကျနော့်အတွက်တော့ ဒီပွဲတွေ စင်ကာပူမှာ ရှိလာတာကိုက အလွန်တန်ဖိုးရှိပါပြီ။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ငွေကြေားနှုန်းနဲ့တင် နားထောင်ခွင့်ရတာ တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် စာရေးဆရာတွေ မထပ်ပဲ တစ်ဦးပြီးတစ်ဦးရဲ့ အာဘော်တွေ ဟောပြောတာတွေ နားထောင်ခွင့်ရတာ စီစဉ်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
မမသက်ဝေရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြန်ကြားရသလို ကျေးဇူးတင်စကားကို စာပေမြတ်နိုးသူများ အဖွဲ့မှာ ကူညီကြတဲ့ လူငယ်အများစုက ဖတ်မိရင် သူရို့ တွေလည်း ကိုယ့်တစ်နေရာက ဝင်ကူညီနိုင်မှုကို ကျေနပ်ကြသလို ပီတိစားနိုင်ကြမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ =)
VIP ဆို လို့ မြင် တာ လေး တ ခု ပြော ချင် တယ။် VIP အ တွက် ချန် ထား တဲ့ နေ ရာ တွေ များ တယ် ဒါ ပေ မယ့် အဲ ဒီ VIP ဆို တဲ့ လူ တွေ က ဖိတ် လို့ ကြား လို့ သာ လာ ရ တယ်
==> VIP ဆိုတာ အလှူရှင်တွေပါ။ ဒီစာပေဟောပြောပွဲလုပ်ဖို့အတွက် တဆိုင်ကိုဘယ်လောက်စသည်ဖြင့်အလှူငွေလဲထည့် ကြော်ငြာလဲထည့် ဆိုရင် လက်မတ် ၅စောင်လောက်အလကားပေးပါတယ်။ အများစုက မအားလို့ မလာနိုင်ကြတာကြောင့် ခုံတွေလွတ်နေတာပါ။ နောက်ကို စလို့နာရီဝက်လောက်အထိခုံလွတ်နေရင် အဲမာသွားထိုင်လို့ရတယ် ဟီး
ပထမပွဲ ဒုတိယပွဲ တတိယပွဲတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အလွန်ပျင်းစရာကောင်းပါတယ်။ ဆရာချစ်စံဝင်းပြောနေတုန်း ရှေ့ဆုံးတမ်းက ဘုန်းဘုန်းတွေ အကုန်အိပ်နေတာ မျက်မြင်။ ဆရာဦးဖေမြင့်က အရှည်ကြီးပြောနေတော့ ဗိုက်စာတာနဲ့ သိပ်တောင် အာရုံမရတော့ပါ။ အချိန်မရလို့ စားပြီ: ပြန်မဝင်တော့တာမို့ အလွန်ကောင်းတဲ့ ဆရာဦးအောင်သင်းကို လက်လွတ်လိုက်ရတယ်။
ShwunMi May 8, 2011 at 3:35 AM
VIP ခုံလွတ်နေရင် သွားထိုင်လို့ရတယ် ဆိုတာ ဘာသဘောနဲ့ ပြောသလဲ.. တကယ်သိချင်မိတယ်။
အလှူရှင်တွေကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ VIP လက်မှတ် မပေးသင့်ဘူးလား။
ပြီးတော့ လုပ်ငန်းရှိတဲ့လူတွေပဲ.. ကိစ္စတွေရှိမယ်၊ အလုပ်များလို့ နောက်ကျရောက်လာရင်.. ပေးထားတဲ့ နေရာကို သူများကထိုင်နေရင် ပွဲစီစဉ်တဲ့လူတွေ ပြန်ဖြေရှင်းပေးနေရတာ သိပ်မကောင်းဘူး ထင်ပါတယ်။ ဘေးလူတွေလည်း အာရုံနောက်ပါတယ်။
ZZZ May 8, 2011 at 12:51 PM
@ Phyo Maw
အမှန်ကတော့ ကိုယ်ပိုက်ဆံပေးထားတယ် ၊ ဒံပေါက်တွေ.တယ် ၊ အချိန်တွေကန်. သတ်ထားတာကို NUS နမူနာနဲ. ပတ်သက်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ပြီး နောက် ပွဲတွေ မှာ ဘယ်လိုအကောင်း အဆုံးဖြစ်နိုင်အောင် လုပ်ကြ မလဲဆိုတာပြောချင်တာပါ၊
ဒံပေါက်တစ်ထုတ်မစားရတာနဲ. ဘာမှမဖြစ်ပါဖူး၊ ကျွန်တော်အရင် ကွန်မန်.မှာ ပြောသလိုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ လက်မှတ်ကိုဈေးလျော့ပြီး အစား မကျွေးပဲ ရေတစ်ဗူးလောက်ပေးရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်၊ အစားအသောက် ကို ဟောပြောပွဲနဲ.ပူးတွဲကြေညာချင်ရင်လဲ အဘက်ဘက်က အဆင်ပြေအောင် စဉ်းစားပေးပေါ့၊ အမှန်ကတော့ ကလန်မန်တီးမောက Swensen's မှာသွားစားတာပါ ၊ မိသားစု ၃ ယောက်သွားစားရင် ဘယ်လောက် ကုန်ကျတယ်ဆိုတာ စားဖူးရင် သဘောပေါက်ပါ့လိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာက ကျွန်တော်က သိပ်မချမ်းသာသလို ဒံပေါက်တစ်ထုတ် အတွက် သိပ်တွက်နေတာမဟုတ်ဖူး ဆိုတာကိုပြောချင်နေတာပါ၊ ဆက်ပြီးလဲ မစောင့်နိုင်ပါဖူး၊ ပိုက်ဆံကုန်မှာကိုလဲ သိပ်ပြီးတွက်နေတဲ့သူ မဟုတ်ဖူးဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်၊ ဒံပေါက်တစ်ထုတ်ကို ကိုင်ထားပြီး နောက်လူပြောတာကို ပြီးအောင် စောင့်ရမယ်လို. blackmail သဘောမျိုး လုပ်တာကတော့ မကောင်းပါဖူး၊ အဲ့ဒီ့အချက်ကို အဓိက illustrate လုပ်နေတာပါ၊ ကျွန်တော့ကွန်မန်. ကို သေသေချာချာဖတ်ပါလေ၊ စစ်သင်တန်းထက် ဆိုးတယ်ဆိုတာက အဲ့ဒီ့ blackmail လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာပါ ၊ ထိုင်ခုံကိစ္စ ကို စစ်သင်တန်းနဲ. မနှိုင်းယှဉ်ပါဖူး၊ စားချင်သူ စား၊ ပြန်ချင်သူပြန်၊
ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီလေးရှိရင်ကောင်းမယ်၊ ခင်ဗျားတို. အဲ့ဒီ့အချက်လေးကို သဘောပေါက်သွားရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ကွန်မန်.ရှည်ရှည်ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီဗျာ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရအောင်လုပ်ဖို. ခဏထားဦး အဲ့ဒီလို အသေး အဖွဲ့ လေးတွေကစပြီး လွတ်လပ်မူလေးတွေ ရှိရင်ကောင်းလိမ့်မယ်၊ စည်းကမ်းရှိတဲ့လွတ်လပ်မူမျိုးပေါ့၊ အပြင်မှာစားစေပြီး ဟောထဲမှာမစားဖို. ကြီးကြပ်ပေါ့၊ နောက်ပြီး ခင်ဗျားတို. ပွဲလုပ်တဲ့သူတွေက NUS မှာလုပ်တဲ့ပွဲကို သွားကြည့်သင့်တယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်း တာလေးတွေ နမူနာယူသင့်ပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ့အဖွဲ.က ငါတို.ရဲ့ ပြိုင်ဘက်၊ သွားစရာမလိုဖူး ဆိုရင်တော့ ကွန်မန်.ရေးမိတာက ကျွန်တော့်ရဲ့ မဟာအမှားပါပဲ၊ အဲဒါကတော့ ကာယံကံရှင်တွေပဲ သိပါလိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော်တို.ပရိတ်သတ်ကတော့ နောင်မှာ ခင်ဗျားတို.အဖွဲ.လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားတစ်ဖွဲ.လုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်ဖြစ် သွားနားထောင်ဖြစ်ပါ့မယ်၊ ကျွန်တော်တို. ပရိတ်သတ်တွေကတော့ရှင်းပါတယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ဂိုဏ်းဂ္ဂဋ အဖွဲ.တွေမရှိပါဖူး၊
မသက်ဝေရဲ့ ကွန်မန်.ဖတ်ပြီးတော့ ဒီပို.စ်အတွက် ကွန်မန်.ကို ဆက်ပြီးမရှည်၊ မရေးတော့ဘူးလို. စဉ်းစားမိပေမဲ့ ကိုယ့်နာမည် တတ်ပြီးရေးလာတော့ လည်း ရေးလိုက်ရပြန်ပြီ၊ ဘလော့ ပိုင်ရှင်ကြီးကိုလည်း အားတော့ နာပါရဲ့ ..